Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween kwaye woyike | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween kwaye woyike
Ngokufika kweHalloween, izindlu zigcwele amathanga, abantwana bayankqonkqoza emnyango bekhala ngeelekese zabo kwaye ilizwe lilungiselela uloyiko ngeyona ndlela isebenzayo. Amaqela, amasiko, iimuvi, imidlalo kunye ewe, nazo ezi zilandelayo Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween kwaye uchithe uloyiko phantsi kwamaphepha ekwindla. Ukulungele?
1 Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween
1.1 Umfazi oMnyama nguSusan Hill
1.2 Amangcwaba ezilwanyana uStephen King
1.3 Ikati elimnyama, nguEdgar Allan Poe
1.4 Ifowuni yaseCthulhu ngu-HP Lovecraft
1.5 Ulungelelwano lobumnyama, nguRay Bradbury
1.6 IDracula nguBram Stoker
1.7 Isiqalekiso seNdlu yeNduli, nguShirley Jackson
1.8 Ukusuka esihogweni, ngu-Alan Moore kunye no-Eddie Campbell
1.9 Imbewu kaMtyholi, ngu-Ira Levin
1.10 Indlu eqalekisiweyo yaseAmityville, nguJay Anson
Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween
Umfazi oMnyama nguSusan Hill
Zingaphezulu kwesigidi iikopi ezithengisiweyo ukudibanisa umsebenzi opapashwe ngo-1983 nguSusan Hill. Ukutshintshwa kwinguqulelo yefilimu nge Daniel Radcliffe Njengomdlali ophambili, Umfazi oMnyama uzelwe kwilivo yakudala yomama ongatshatanga onyana wakhe warhaxwa kumgxobhozo wedolophu apho i-protagonist, igqwetha uArthur Kipps, ibuyela ukuza kungqina ukuhamba kwesiporho ngaphambi kokudlula kusweleke umntwana omtsha. I-Gothic yoyikisayo ilebheli emnyama ye halloween apho iziporho zingabaphambili. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona ncwadi zibalaseleyo zokufunda ngeHalloween.
Amangcwaba ezilwanyana uStephen King
Abanye bathi le ncwadi Kwakoyikisa kangangokuba uKing ngokwakhe wayeka ukuyibhala okwethutyana. Nangona ungekaze ufumane uhlengahlengiso olunyanzelekileyo lwefilimu, amangcwaba ezilwanyana ngokuqinisekileyo yenye yeencwadi ezothusayo ngumbhali waseMelika. Ibali lixela ukoyikeka kosapho oludlulela kwidolophu encinci eMaine apho amangcwaba ezilwanyana akhulula "unozakuzaku" wakhe wokuqala, icawa yekati, eyathi yaqhutywa kwaye ubukho bayo buqinisekisa isiqalekiso esidala saseIndiya.
Ikati elimnyama, nguEdgar Allan Poe
Ngaphandle kwamaphepha ayo ambalwa kunye nomlinganiswa wasentsomini, uhlobo luka-Edgar Allan Poe, Ikati emnyama lelinye lawona mabali awoyikisayo embalini. Iyelenqe elinika isibini esitshatileyo ubomi obuzolileyo obuhlala nekati yabo, de umyeni aqale ukusebenzisa kakubi utywala, aphelise ubomi besilwanyana. Umbono wesiphumo sakhe siqinisekisa ubukrelekrele bombhali onelishwa owasweleka etywaleni esitratweni, eyedwa, esongelwe ebumnyameni obuya kuchaza imisebenzi yakhe emikhulu yokubhala.
Ifowuni yaseCthulhu ngu-HP Lovecraft
Zimbalwa iiyunivesithi zoncwadi ezinemibalabala nezothusayo zokucinga ngengqondo kaLovecraft, umbhali onezilo, izinto ezifanayo kunye nomlingo omkhulu ochaza isiqwenga sembali Uncwadi olothusayo. Umzekelo, i-Call of Cthulhu, umsebenzi odibanisa imisonto emibini ebalisayo, leyo yenjingalwazi ehlukunyezwa lihlelo kunye noomatiloshe kwiilwandle eziphakamileyo, ikhonkco labo bubukho be-scaly-high-scaly ephezulu evela kwindawo engaphandle kwaye nditshone ezinzulwini zolwandle.
Ulungelelwano lobumnyama, nguRay Bradbury
Kuthiwa umlumbi osecaleni u-Mnu Electric wayenguye owakhuthaza uRay Bradbury ukuba abe ngumbhali. Enye ye Ababhali ababalaseleyo baseMelika benkulungwane yama-XNUMX Waphinda waziphosa ebuntwaneni bakhe xa wayedala i -Fair of Darkness, inoveli eyapapashwa ngo-1962 apho abadlali ababini abakwishumi elivisayo, uJim Nightshade noWilliam Halloway, bafumana uloyiko kumdlalo olungileyo ofika kwisiXeko esiyintsomi ngo-Okthobha Midwest Green. Ukoyikeka okugqithisileyo kunye nokugqibeleleyo.
IDracula nguBram Stoker
Ukuba kukho intsomi yokoyika ukubala UDracula, umlinganiswa odumileyo kunye nevampiric owenziwe nguBram Stoker kwaye ophefumlelwe yinkosi enegazi laseRomania uVlad the Impaler. Ishicilelwe kwi-1897, iDracula ibaliswa nge-epistolary evela kumaxwebhu ahlukeneyo, ubukhulu becala ebhalwe nguJonathan Harker, igqwetha lesiNgesi eliya kwinqaba yasentsomini ye-Count Dracula, eTransylvania. Nangona yayingengomsebenzi wokuqala ukubandakanya abalinganiswa vampire kuncwadi, iDracula yaba yeyona inempembelelo kwimbali.
Isiqalekiso seNdlu yeNduli, nguShirley Jackson
Yapapashwa ngo-1959, isiqalekiso seNdlu yaseHill sisa kwindlu endala enamehlo apho iziporho zijikeleza kwiipaseji kunye neziqalekiso ezindala ezilele kwiikona ezingalindelekanga. Ujoliso oloyikisayo olutsala abalinganiswa abaphulukene nobomi kunye neengxaki ezinzulu nabazali babo. Umsebenzi kaJackson awuzange uvelise kuphela isibheno esiqhelekileyo izindlu ezingena bantu, kodwa waphefumlela uStephen King ngokwakhe kwi -Shining kunye nefilimu engaphumelelanga ebizwa ngokuba yiDen.
Ukusuka esihogweni, ngu-Alan Moore kunye no-Eddie Campbell
Ifunyenwe njengamahlaya afakwe ngaphakathi ingqokelela yesihogo, kukho iikopi ezininzi ezibandakanya indalo iphela ebhalwe ngu-Alan Moore yaza yatsalwa nguEddie Campbell kwiminyaka yama-90s. Inika ingqwalaselo kwiziganeko ezenzeka ngexesha nasemva kokubulawa kukaWhitechapel okwenziwa nguJack the Ripper odumileyo, le noveli yemifanekiso ibonisa uloyiko Izitrato zase-Victoria yase-London kunye nohlobo lomlinganiswa osasusa ingxoxo enkulu njengokungcangcazela.
Imbewu kaMtyholi, ngu-Ira Levin
Ndisandula ukufudukela kwigumbi elitsha eNew York, uRosemary uqala ukuba nobudlelwane nabanye abamelwane abangummangaliso. Kwangelo xesha, uyakhulelwa. Ijolise kwimisitho yanamhlanje kunye neenqaba zikaSathana eNtshona, iMbewu kaMtyholi yenye yezo zinto zisebenzisa ingqalelo yomfundi. kwi-crescendo ukungena kwindalo efayo. Umsebenzi, opapashwe ngo-1967, usebenze njengokhuthazo lwe-Roman Polansky kwifilimu yakhe edumileyo ehambelana noMia Farrow.
Indlu eqalekisiweyo yaseAmityville, nguJay Anson
NgoDisemba ngo-1975, usapho lakwaLutz lwafudukela kwindlu engaphandle kweNew York apho kwabulawa khona abantu abaninzi kunyaka ongaphambili. Isiganeko esoyikisayo esacacisa amafu eempukane kunye namazwi aqala ukuvakala ezinzulwini zobusuku esikhokelela kubundlobongela. Eyona ilungileyo (okanye eyona imbi kakhulu) kuzo zonke? Inene yenzekile le, kwaye incwadi ka-Anson ithatha iinkcukacha ezipheleleyo kule nyanga yosapho yoyikisayo.
Ezi Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween ziyafudumeza ukulinda elona theko liyoyikisayo lonyaka. Iiklasikhi zokufunda nangaliphi na ixesha, kodwa ngakumbi ngeveki xa amathanga ekhukula yonke into, amahlathi abonakala encwina kwaye imfuneko yokoyika iba phantse sisiko ngokwalo.
Zeziphi iincwadi oza kuzifunda ngeHalloween ondilungeleyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezili-10 ezilungileyo zokufunda ngeHalloween kwaye woyike